August | 2009 | အမှတ်တမဲ့.....နှင်း....
August 20, 2009 in ကြိုက်တဲ့ ကဗျာတွေ | Tags: ခင်ဇော်မြင့် | 1 comment
ကောင်းကင်ယံက ညို့တက်လာသောမိုးသားများကို ကြည့်ကာ
ဒီကိစ္စဟာ တအားနူးညံ့တယ်။ ။
ဆရာခင်ဇော်မြင့်ရဲ့ လွန်ခဲ့တဲ့ ငါးနှစ်လောက်က ဖတ်ခဲ့ရတဲ့ ကဗျာပါ။ မှတ်ဥာဏ်ထဲမှာ ကျန်နေသေးလို့ တင်လိုက်တာပါ။ ဖော်ပြခဲ့တဲ့ magazine နဲ့ ခုနှစ်ကတော့ မမှတ်မိတော့ပါဘူး။
August 8, 2009 in မင်းစိုးရာ | Tags: စွဲစွဲလမ်းလမ်း |3comments
ငါက ချစ်ခြင်းမှာ ဖျတ်ဖျတ်လူးရမယ့်အရွယ်လား
ငါ့မေတ္တာကို ကောင်ယူမွေးစားလှည့်ပါ ။
၀င်းကနဲပြိုးပြက် ငါ့ရင်တစ်ဆောင်လုံး အသက်ဓာတ်
ငါသီဆိုရတဲ့ လောကဓံတေးက သွေးသံရဲရဲ
သို့ပေမယ့်လေ. . .
နင်သာ ငါ့အနုပညာ ငါ့ကဗျာ
ငါလေ. . .
ညီမလေးရေ. . .
ကံကောင်းခြင်းကိုသာ မွေးဖွားသန့်စင်ပါစေ. . .
ချစ်မိခြင်းကြောင့် ဖြစ်ရတဲ့ အပြစ်တွေရှိရင်လည်း
ညီမလေးရယ် ။ ။
August 8, 2009 in နောင်မင်းအေး | Tags: ဖြူပြာပြာ | Leaveacomment
ပွင့်ဖတ်တွေ စိမ်းလို့။ ။
August 8, 2009 in ဘုန်းနေသွန်း | Tags: နှင်း |2comments
လေမှာထင်နေ ကိုယ်သင်းရနံ့လေး အသံပေးတယ်
လှတစ်မျက်နှာ သူ့အပြုံးလေး ကိုယ်ထင်ပြတယ်
စံပါယ်တင်မှဲ့လေး သူ့ဒဏ္ဍာရီ။ ။
ရတီမဂ္ဂဇင်း ၊ ၂၀၀၇
ဒီရင်ထဲ စိုက်ဝင်နေတာ ဘယ်လောက်ကြာပြီလဲ
ငါက အကျအပေါက်များများနဲ့ပဲ ပန်းကောက်ချင်ခဲ့သူ
ဒီလို တိတ်တိတ်ခိုးခိုးချစ်ရတာကိုက အရသာပါ
ရိုးမြေကျသစ်တစ်ပင် စိုက်ပျိုးခဲ့ပါတယ်။ ။
နှလုံးအိမ်မဂ္ဂဇင်း ၊ ၂၀၀၅
တိတ်တခိုးအချစ် (သို့) ညီမလေးမိဆိုး
August 1, 2009 in ဘုန်းနေသွန်း | Tags: မိဆိုး |5comments
အိပ်မက်မှာ မင်းဆံနွယ်တွေ ရေလိုမျောလို့
သံသရာမှာ မင်းရယ်သံလေး ကမ်းလိုတင်လို့
Idea Magazine ၊ ၂၀၀၉